ऊ नजिक आयो र जिस्कायो, ‘यो बाहुनीलाई लाज पनि लाग्दैन । बूढी भैसकेको पत्तो छैन, जामा उचालेर एकखुट्टे खेल्छे ।’ म पानीपानी भएँ ।
नयाँ–नयाँ पेन किन्न मलाई गाह्रो थिएन । बुवा र आमाले आफ्ना लागि किनेका कलम पनि मैले नै हिँडाउथेँ । त्यसैले मसँग त्यो बेला भर्खरै बजारमा आएका सेलो जेल पेन हुन्थे— निला, काला, राता, हरिया पाइने जति रङका । तर मलाई रंगाउने रंग त ऊ थियो । मलाई खुसी बनाउने र दुःखी बनाउने के थियो ऊसँग ? ‘तिमीलाई केहीको फिक्री थिएन,’ उसले भन्यो । तर थियो, उसको ।
उसको फिक्री गर्दागर्दै एसएलसी सकियो । सुनेँ, ऊ त गाउँ छोडेर गयो अरे पोखरा । मेरो मनको चंगा ओस्सिएर झर्‍यो । हल्लियो मेरो धरती । मेरो आँखाको ठेगानामा कुनै जादु थिएन । बस्, उदासी । ऊ गयो पोखरा साइन्स पढ्ने तयारी कक्षा लिन । मेरो मुटु उफ्रिन थाल्यो । अकस्मात बिरानो लाग्यो संसार । मलाई मन परेका हर चिज फिक्का लाग्न थाले । आफ्नै ठाउँ, आफ्नै घर उराठलाग्दो लाग्न थाल्यो । ओहो ! कहाँ जाऊँ ? कसलाई भनूँ ? छातीभित्र मडारिएको तुफान बाँड्न सक्ने मेरो कोही थिएन । डर लाग्थ्यो, एक्लैएक्लै कोही केटोलाई सम्झिन्छु भन्दा अरुले के सोच्लान् ! इज्जतै जाने भयो भन्ने कुराले काम्थेँ भित्रभित्रै फेरि । तनाव, उदासी र डरको त्यो आँधीमय अनुभूति एक्लै कसरी सामना गरेँ होला, सोच्दा अचम्म लाग्छ ।
तर आइडियलले के भन्ने हो, पत्तो थिएन । म भने एक्लै यता भाग्ने योजना बनाइरहेकी थिएँ । ...
मेरो मन चिसो भयो । ‘डरलाग्दी रैछे बूढी,’ साथीले भनी ।
शनिबार, जेठ १८, २०७० १४:००:००